Tripelennamine - Hello Sayarwon
HelloSayarwon » ဆေးဝါးများ » ဆေးဝါးနှင့်ဆေးဖက်ဝင် » ဆေးဝါးများအားလုံး » Tripelennamine
Generic Name: Tripelennamine Brand Name(s): Generics only. No brands available.
Tripelennamine ကို ဘာအတွက်အသုံးပြုကြသလဲ
Tripelennamineသည် Antihistamine တစ်မျိုးဖြစ်သည်။ Tripelennamine က ခန္ဓါကိုယ်တွင်တွေ့ရသော Histamine ဓါတ်ပစ္စည်း၏အာနိသင်ကို တားပေး၏။
Tripelennamine ကို နှာချေခြင်း၊ နှာရည်ယိုခြင်း၊ ယားခြင်း၊ မျက်ရည်ထွက်ခြင်း၊ အင်ပျဉ်ထခြင်း၊ အကွက်ထခြင်း နှင့် တခြားသောဓါတ်မတည့်သည့် လက္ခဏာများနှင့် အအေးမိခြင်းတို့တွင် အသုံးပြုပါသည်။
Tripelennamine၌ အထက်ပါစာရင်းတွင်မပါသည့် အသုံးများလည်းရှိကောင်းရှိနိုင်ပါသည်။
Tripelennamine ကို ဆရာဝန်ညွှန်သည့်အတိုင်း အတိအကျသုံးစွဲပါ။ အညွှန်းအကြောင်းနားလည်ပါက ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်၊ သူနာပြု၊ ဆရာဝန်တို့ကို သေချာမေးပါ။
ဆေးအကြိမ်တိုင်းကို ရေတစ်ခွက်အပြည့်နှင့် သောက်ပါ။ Tripelennamine ကို ဗိုက်မနာစေရန် အစာနှင့်တွဲသောက်နိုင်ပါသည်။
Tripelennamine sustained-release အမျိုးအစားတွင် ဝါးခြင်း၊ ချေခြင်း၊ ခွဲခြမ်းခြင်းတို့ကို မပြုလုပ်ရပါ။ ဆေးတစ်လုံးလုံးမျိုချရမည်။ သူတို့ကို ခန္ဓါကိုယ်တွင်ဖြည်းဖြည်းချင်းသာဝင်စေရန် စီမံထားခြင်းဖြစ်သည်။
မှန်ကန်သောပမာဏကိုရရန်အတွက် Tripelennamine ဆေးရည်များကို ပုံမှန်စားပွဲတင်ဇွန်းနှင့်မချိန်ပဲ ဆေးဗူးပါချိန်တွယ်ခွက်နှင့်သာချိန်ပါ။ ချိန်တွယ်ခွက်မပါလျှင် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ကိုမေးပါ။
သင့်အားညွှန်ကြားသည်ထက်ပိုပြီး ဘယ်တော့မှ မသုံးစွဲရပါ။ Normal-release ဆေးပြားများကို တစ်ရက်လျှင် ၆ ကြိမ် (၄ နာရီခြားတိုင်းတစ်ခါ) အထိ သောက်နိုင်ပါသည်။ အများဆုံးပမာဏမှာ 600 mg ဖြစ်သည်။ sustained-release ဆေးပြားများကိုတော့ တစ်ရက်လျှင် ၂-၃ ကြိမ် (၈-၁၂ နာရီခြား) အများဆုံးပမာဏ 300 mg အထိသာ သောက်နိုင်ပါသည်။
Tripelennamine ကို တိုက်ရိုက်နေရောင်ခြည်မထိုးအောင်နှင့် စိုစွတ်မှုမရှိအောင်ထားခြင်းက အကောင်းဆုံးသိုလှောင်သိမ်းဆည်းနည်းပင် ဖြစ်သည်။ ဆေးအာနိသင်ပျက်ပြယ်ခြင်းနှင့် ဆေးအနေအထား ပျက်ယွင်းမှုများ မဖြစ်စေရန် Tripelennamine ကို ရေချိုးခန်းတွင်သိမ်းဆည်းခြင်းနှင့် ရေခဲအောင် သိမ်းဆည်းခြင်းမျိုးမပြုလုပ်ပါနှင့်။ Tripelennamine ဆေးအမျိုးအစားနှင့် ဆေးထုတ်လုပ်သည့်ကုမ္ပဏီ ကွဲပြားမှုပေါ်မူတည်ပြီး သိမ်းဆည်းသောပုံစံ ကွဲပြားခြားနားမှုများ ရှိနိုင်ပါသည်။ ထို့အတွက် ဆေးဘူးအခွံ၌ပါသော သိုလှောင်သိမ်းဆည်းမှု ညွှန်ကြားချက်ကို ကြည့်ရှုစစ်ဆေးခြင်း သို့မဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူအား မေးမြန်းခြင်းကို အမြဲလုပ်ပါ။ လုံခြုံစိတ်ချရစေရန်အတွက် ဆေးဝါးအကုန်လုံးကို ကလေးများ၊ အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်များနှင့်ဝေးရာတွင် ထားပါ။
Tripelennamine အားအိမ်သာထဲပစ်ချခြင်း၊ ရေထွက်ပေါက်များမှ ဆေးချခြင်းမျိုးအား မလုပ်သင့်ပါ။ ဆေးဝါးများကို မလိုအပ်တော့သည့်အခါ ဒါမှမဟုတ် သက်တမ်းကုန်ဆုံးသွားသည့် အခါများတွင် စနစ်တကျစွန့်ပစ်ရန် အရေးကြီး၏။ ဆေးဝါးများကို စနစ်တကျ မည်ကဲ့သို့စွန့်ပစ်ရမည်ဆိုခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ သင့်၏ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်နှင့် တိုင်ပင်နိုင်ပါသည်။
Tripelennamine အသုံးမပြုခင် ဘာတွေသိသင့်သလဲ
Tripelennamine တွင်ပါသော active agent များ inactive agent များနှင့် ဓါတ်မတည့်မှုရှိလျှင်။
monoamine oxidase inhibitor (MAOI) များ ဥပမာ – isocarboxazid (Marplan), phenelzine (Nardil), or tranylcypromine (Parnate) စသည်တို့ကို ပြီးခဲ့သည့် ၁၄ ရက်အတွင်းသောက်ထားပါက Tripelennamine ကိုမသုံးပါနှင့်။ အန္တရာယ်ရှိသည့် ဆေးဝါးဓါတ်ပြုမှုဖြစ်လာနိုင်ပြီး ပြင်းထန်သည့် ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများဖြစ်လာနိုင်ပါသည်။
အထက်ဖော်ပြပါစာရင်းတွင်ပါသောအခြေအနေများ သင့်၌ရှိနေလျှင် Tripelennamine သုံးမရခြင်း၊ ဆေးပမာဏညှိခြင်းများ လုပ်ရနိုင်ပါသည်။
Tripelennamine သည် သန္ဓေသားကို အန္တရာယ်ရှိမရှိ မသိရသေးပါ။ ကိုယ်ဝန်ရှိပါက ဆရာဝန်ကိုမပြောဘဲ Tripelennamine ကိုမသောက်ရပါ။
Tripelennamine သည် နို့စို့ကလေးကို အန္တရာယ် ဖြစ်စေနိုင်၏။ နို့တိုက်ကျွေးနေပါက ဆရာဝန်ကိုမပြောဘဲ Tripelennamine ကို မသောက်ရပါ။
အသက် ၆၀ ကျော်များတွင် Tripelennamine ၏ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများကို ပိုခံစားရနိုင်သည်။ ဆေးပမာဏလျော့ရန်လိုကောင်းလိုနိုင်ပါသည်။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေချိန် ဒါမှမဟုတ် ကလေးနို့တိုက်နေချိန်မှာ Tripelennamine ကိုသုံးစွဲဖို့ စိတ်ချရပါသလား
Tripelennamine ကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့် ဘယ်လိုဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်နိုင်သလဲ
ဓါတ်မတည့်သည့်လက္ခဏာများ (အသက်ရှူရခက်ခြင်း၊ လည်ချောင်းပိတ်ခြင်း၊ နှုတ်ခမ်း၊ လျှာ၊ မျက်နှာများဖောင်းကြွခြင်း၊ အင်ပျင်ထခြင်း) ဖြစ်လာပါက ဆေးကိုရပ်ပြီး ဆေးကုသမှုခံယူရမည်။
ပြင်းထန်မှုနည်းသည့်ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများလည်း ဖြစ်နိုင်ပါသည်။ အောက်ပါတို့ဖြစ်လာပါက ဆေးကိုမရပ်ဘဲ ဆရာဝန်နှင့်အရင်တိုင်ပင်ပါ။
အိပ်ချင်ခြင်း၊ နွမ်းနယ်ခြင်း၊ ခေါင်းမူးခြင်း
ဘယ်ဆေးတွေက Tripelennamine နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလဲ
Tripelennamine သည် သင်အခုသောက်သုံးနေသည့် တခြားသောဆေးဝါးများနှင့် ဓါတ်ပြုမှုများဖြစ်နိုင်ပြီး ဆေးဝါးအာနိသင်ပြောင်းခြင်းနှင့် ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးဖြစ်လာနိုင်သော ပြောင်းလဲမှုများဖြစ်နိုင်ပါသည်။ မလိုလားအပ်သောဆေးဝါးဓါတ်ပြုမှုများမဖြစ်စေရန် သင်လက်ရှိသောက်သုံးနေသော ဆေးဝါးများအားလုံးကို စာရင်းပြုစုထားပြီး (စာရင်းလုပ်လျှင် ဆရာဝန်ညွှန်ကြားထားသည်များ၊ မညွှန်ကြားဘဲသောက်သုံးနေသည်များ၊ သဘာဝဆေးဘက်ဝင်ပစ္စည်းများအားလုံးပါရပါမည်။) ဆရာဝန် သို့မဟုတ်ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူအား အမြဲပြောပြပါ။ ဆေးဝါးများကို ဆရာဝန်ခွင့်ပြုချက်မပါပဲ သောက်သုံးခြင်း၊ ရပ်ဆိုင်းခြင်း၊ ပမာဏပြောင်းလဲခြင်း စသည်တို့ မပြုလုပ်ပါနှင့်။
အစားအသောက်တွေနဲ့ အရက်က Tripelennamine နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလား
Tripelennamine က အစားအသောက် သို့မဟုတ် အရက်သေစာနှင့် ဓါတ်ပြုမှုများဖြစ်နိုင်ပြီး ဆေးဝါးများ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုပုံစံနှင့် ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးဖြစ်လာနိုင်သောပြောင်းလဲမှုများ ဖြစ်နိုင်ပါသည်။ မလိုလားအပ်သည့် ဓါတ်ပြုမှုများမဖြစ်လာစေရန် အစားအသောက်၊ အရက်သေစာများနှင့် ဓါတ်ပြုနိုင်ချေရှိမရှိကို မေးမြန်းတိုင်ပင်ပါ။
ဘယ်ရောဂါအခြေအနေတွေက Tripelennamine နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလဲ
Tripelennamine သည် လက်ရှိသင့်ကျန်းမာရေးအခြေအနေများနှင့် သက်ရောက်ဓါတ်ပြုမှုများရှိနိုင်ပါသည်။ သင်၏ ကျန်းမာရေးအခြေအနေအားပိုဆိုးသွားစေခြင်း သို့မဟုတ် ဆေးသက်ရောက်မှုပုံစံ ပြောင်းလဲသွားခြင်းများ ဖြစ်နိုင်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် သင်၏ကျန်းမာရေးအခြေအနေအကုန်လုံးကို သင့်ဆရာဝန် သို့မဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်ကို အသိပေးရန်အရေးကြီးပါသည်။
ရေတိမ် သို့မဟုတ် မျက်လုံးတွင်း ဖိအားများခြင်း
ဆီးကြိတ်ကြီးခြင်း၊ ဆီးအိမ်ပြဿနာများ၊ ဆီးသွားရခက်ခြင်း
အရွယ်ရောက်ပြီးသူတွေအတွက် Tripelennamine ရဲ့ အသုံးပြုရမယ့်ပမာဏကဘယ်လောက်လဲ
Regular-release ဆေးပြားများကို တစ်ရက်လျှင် ၆ ကြိမ် (၄ နာရီခြားတစ်ခါ) အများဆုံး 600 mg အထိ သောက်နိုင်ပါသည်။ Sustained-release ဆေးပြားများကိုတော့ တစ်ရက်လျှင် ၂-၃ ကြိမ် (၈-၁၂ နာရီခြား) အများဆုံးပမာဏ 300 mg အထိသာ သောက်နိုင်ပါသည်။
ကလေးတွေအတွက် Tripelennamine ရဲ့ အသုံးပြုရမယ့်ပမာဏကဘယ်လောက်လဲ
Tripelennamine ကိုအောက်ဖော်ပြပါ ဆေးဝါးပုံစံများနှင့် အချိုးအစားများဖြင့် ရရှိနိုင်ပါသည်။
Tripelennamine ကိုသုံးစွဲဖို့ လွတ်သွားခဲ့ပါက (မေ့ခဲ့ပါက) သတိရသည့်အချိန်တွင် အမြန်ဆုံးသုံးပါ။ သို့သော်လည်း နောက်တစ်ကြိမ်သုံးရမည့်အချိန်နှင့် နီးကပ်နေပြီဆိုပါက လွတ်သွားသောအကြိမ်ကို ကျော်ပြီး ပုံမှန်အချိန်၌ပင်သုံးလိုက်ပါ။ ဆေးပမာဏအား နှစ်ဆတိုးတာမျိုး မလုပ်ပါနှင့်။
တည်းဖြတ်သည့်နေ့ နိုဝင်ဘာ 26, 2018 | နောက်ဆုံးတည်းဖြတ်ခြင်း မေ 14, 2019
Tripelennamine. https://www.drugs.com/mtm/tripelennamine.html. Accessed November 22, 2017
Tripelennamine. https://www.drugbank.ca/drugs/DB00792. Accessed November 22, 2017
ဓာတ္္မတည့္ျခင္းမ်ား ႏွင့္Autoimmune ေရာဂါအေျခအေနမ်ား, ဓာတ္မတည့္ျခင္းအေၾကာင္း, ကျန်းမာရေးစင်တာ